အိမ်သုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုလမ်းညွှန် - ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုမည်သို့လုံခြုံစေနိုင်သနည်း - ကျန်းမာရေးပညာရေး | မေ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီသတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ ဖျော်ဖြေရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> အိမ်သုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုလမ်းညွှန် - ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုမည်သို့လုံခြုံစေနိုင်သနည်း
မိဘတစ် ဦး အနေနှင့်ကလေးများသည်စပ်စုပြီးသဘာ ၀ စူးစမ်းရှာဖွေသူများဖြစ်ကြောင်းအမြဲသတိရရန်လိုအပ်သည်ဟုမိဘများဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ RN Mary Sweeney ကပြောသည် အမေကအကောင်းဆုံးကိုချစ်တယ် ။ သူတို့ကသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့မည်သည့်အံဆွဲသို့မဟုတ်ကက်ဘိနက်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်လည်းအလားတူပင်။ သူတို့ဟာသင်သိချင်တဲ့နေရာများသို့သင်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်သူတို့အံ့သြလောက်အောင်လိမ္မာပါးနပ်စွာသိလိုစိတ်ရှိနိုင်သည်။
ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်အဘယ်အရာစားစရာကောင်းသည်၊ မစားသည်ကိုနားမလည်ပါ။ သူတို့ကခင်ဗျားဆေးပြားတွေသောက်ပြီးမျိုနေတာကိုတွေ့တာ။
တကယ်လို့မင်းရဲ့ကလေးတွေ၊ လုပ်တယ် ဆေးကုသမှုလိုတယ်၊ မင်းကသူနာပြုရဲ့အခန်းကဏ္andကိုယူပြီးအဲဒါကိုပေးရမယ်။ မတူညီသောဆေးများသည်မတူညီသောသောက်သုံးသောဆေးများလိုအပ်ပြီးမတူညီသောအချိန်များတွင်လည်းသောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ဆေးရုံများတွင်ပင်အမှားများဖြစ်ပွားတတ်သည်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သိချင်စိတ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘဝမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမှားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60,000 ကလေးများ, မရေမတွက်နိုင်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်နှစ်စဉ်အရေးပေါ်ခန်းသို့ရောက်ရှိလာကြသောကြောင့်သူတို့သည်မတော်တဆမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစားသုံးမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆေးညွှန်းသတ်မှတ်ထားသောလူ / တိရစ္ဆာန်သည်၎င်းကိုသာသောက်သည်။
လူ့ / တိရိစ္ဆာန်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျသောက်သည်။
အရ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ , ဆိုးရွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အပျက်များ (ADEs) သည်တစ်နှစ်လျှင် ၁.၃ သန်းကျော်အရေးပေါ်ခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ ယင်းတို့အနက်တစ်နှစ်လျှင်လူ ၃၅၀,၀၀၀ သည်ဆေးရုံတက်ရသည်။ ADEs များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံပိုကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဤဖြစ်ရပ်များဤမျှမကြာခဏဖြစ်သနည်း ရိုးရိုးလေးပြောရရင်၊ အထောက်အကူပြုတဲ့ဆေးအသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆေးတွေများများသောက်နေပြီဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆေးဝါးများသောက်ရန် (သို့မဟုတ်ကလေးသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပေးရန်) ဆေးများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မတော်တဆမှားယွင်းသောဆေးသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဆေးကိုသုံးပါကပိုမိုမြင့်မားသောအခွင့်အရေးရှိသည်။
ဆေးဝါးလုံခြုံမှုအတွက်5R ကိုဘာတွေလဲ?
ဆေးဝါးအတွက်လုံခြုံမှုအတွက်5R ကိုရှာဖွေခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုဆေးပေးသည့်အခါမတော်တဆသင်၏ကလေးသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမထိခိုက်စေရန်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျသငျသညျက left ဘယ်မှာညာဘက်ဆေးပြားပုလင်းကိုဖမ်းဆုပ်နေကြသည်သေချာနေလျှင်ပင်အိမ်သူအိမ်သားအခြားတစ်စုံတစ် ဦး ကပတ်ပတ်လည်ပုလင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေမည်။ ဆေးဘူးရဲ့ပုလင်းကိုကြည့်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနာမည်ကိုအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ဖတ်ပါ။
ဆေးများသောက်ရန်လွယ်ကူပါသည်။ ပမာဏကိုနှစ်ကြိမ်သာစစ်ဆေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဝက်ဆေးပြားများကိုအထူးသဖြင့်ကလေးများသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားဆေးပေးနေချိန်တွင်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းကိုပုလင်းပေါ်တွင်ရှင်းလင်းစွာမှတ်သားထားသင့်သည်။
အရည်ပမာဏကိုသင်တိုင်းတာရသည့်အတွက်အရည်ဆေးများသည် ပို၍ ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဤဆေးညွှန်းများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် (မီလီမီတာကဲ့သို့) အကျွမ်းတဝင်မရှိသောမက်ထရစ်တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူလာသည်။
မိဘအုပ်ထိန်းမှုသတင်းအချက်အလက် site ကိုတည်ထောင်သူ Tori Hamilton, ဆေးဝါးနှင့်အတူပါလာသောတိုင်းတာကိရိယာကိုသေချာစွာအသုံးပြုပါ။ Mothericity.com ။ အကယ်၍ ဆေးသည်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာနှင့်မပါရှိပါကတိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်တံဆိပ်ကပ်ထားသောဆေးထိုးအပ်သို့မဟုတ်ခွက်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ မိဘများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်တိုင်းတာရန်ဇွန်းများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
အချို့ဆေးဝါးများကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်၊ အချို့ကိုနံနက်စောစောနှင့်ညနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ခေါက်၊ အခြားသူများကိုမူတစ်နေ့လုံးတစ်သမတ်တည်းသောက်သုံးကြသည်။ ဤညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာပါကသင့်ကလေးသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကုသနိုင်လိမ့်မည်။ မတော်တဆအချိန်ကိုက် messing သူတို့ကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာရေးသားထားသောဆေးအချိန်ဇယားဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ်စဉ်အရရေးထားသမျှအားလုံးသည်အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဆေးများကိုစီမံခန့်ခွဲသူများစွာရှိပါကပုံနှိပ်ထားသည့်အချိန်ဇယားကလူတိုင်းကိုသတင်းအချက်အလက်အတူတူအလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသေချာစေသည်။
ဆေးပြားအများစုကိုနှုတ်ဖြင့်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောကလေးများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆေးဝါးကိုအစားအစာနှင့်ရောစပ်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြင်ဆင်ခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဆေးဝါးကိုထိရောက်မှုနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးကိုအရည်ပျော်စေနိုင်သောကြောင့်အစားအသောက်နှင့်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းမပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီအရသိရသည် ။ ဆေးဝါးများကိုအစားအစာသို့မဟုတ်အရည်နှင့်ရောမွှေမီသင့်ကလေး၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်ကိုမေးမြန်းပါ။
သင်လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်းလိုက်နေစေရန်သေချာပါစေ။ ဆေးလုံးတစ်လုံးလုံးကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းမျိုချဖို့ညွှန်ကြားပါ။ အကယ်၍ သူတို့က ဆက်၍ ငြင်းဆန်နေပါကသင်စီမံရန်ကြိုးစားနေသည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆေးများအတွက်သင့်လျော်သည့်အကြံဥာဏ်များအတွက်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုခေါ်ပါ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဆေးဝါးကိုအစားအစာနှင့်တွဲဖက်ခြင်းက၎င်းတို့ကိုသောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာသည်ဆေးပြားသို့မဟုတ်အရည်ဆေးများကိုညွှန်းသောအခါသင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မှန်ကန်သောဆေးထိုးမှုကိုသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တောင်းပါ။
စင်ပေါ်သည်မီးဖိုချောင်ကဲ့သို့ common ည့်ခန်းတစ်ခန်းတွင်မဟုတ်ဘဲရေချိုးခန်းကဲ့သို့သော့ခလောက်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပါ။
သင့်အိမ်တွင်ကလေးများသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိပါက၊ သင့်တွင်အခြားဆေးဝါးများကိုပိတ်ဆို့ရန်နည်းလမ်းမရှိပါကသင့်အားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Lockbox တစ်ခုလိုအပ်သည်။ သင့်အိမ်၌သင်၏ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောသော့ခတ်ထားသောဗီရိုတစ်ခုရှိပါကထိုအရာသည်လည်းအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်, မှတ်ချက်ပြု Sweeney ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဓာတ်မတည့်မှုအတွက် EpiPen ကဲ့သို့သောသင်၏ဆေးဝါးများကိုမကြာခဏ (သို့) လွယ်ကူစွာရယူရန်လိုအပ်ပါကသင်၏ဆေးဝါးများသည်သော့နှင့်သော့အောက်တွင်ရှိနေရန်အန္တရာယ်မရှိဟုသူမကဆိုသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ဆေးများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးထားပါ။
Sweeney ကလည်းရေချိုးခန်းများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗီရိုအလွန်မြင့်မားသည်မဟုတ်, ကလေးများကုလားထိုင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကောင်တာ၏ထိပ်ကနေသူတို့ကိုအလွယ်တကူရနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ကလေးများသည်လည်းရေချိုးခန်းအတွင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့သော့ခတ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ သူမပြောတာကဆေးဝါးကိုမင်းရဲ့အိပ်ခန်းဗီရိုထဲမှာဒါမှမဟုတ်မီးဖိုချောင်ကတ်မှာမင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာထားဖို့စဉ်းစားပါ။
ဆေးဆိုင်ကအကြံပြုပါကဆေးညွန်းဆေးများကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သာထားရှိပါ။ သင့်တွင်ကလေးများရှိပါကအထူးသဖြင့်ဤဆေးဝါးများအတွက် lockbox တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းထားပါ။ အပိုကုန်ကျစရိတ်သည်ကလေးငယ်များအစာရှာနေသည့်မတော်တဆအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများအတွက်နေအိမ်လုံခြုံအောင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
သင်၏အိမ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ရှိသည် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းပါသည် :
သင့်ကလေးများသည်မည်သည့်ဆေးဝါးများမှမရနိုင်ပါစေ - ဗီတာမင်များ၊
ဆေးအားလုံးကိုလုံခြုံစွာထားပါ။ သင့်တွင် lockbox တစ်ခုမရှိပါကတစ်ကြိမ်ဝယ်ပြီး၎င်းဆေးများကိုသင်၏အိမ်ရှိအမြင့်ဆုံးသိုလှောင်ခန်းတွင်သိမ်းထားပါ။ ထို့အပြင်ကလေးဆေးယဉ်ပါးသောအဖုံးများကိုပေးရန်သင့်ဆေးဝါးပညာရှင်အားတောင်းဆိုပါ။ သင်ဆေးပြားများကိုသော့ခတ်ရန်အဖုံးများကိုလည်းသင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ဆေးပြားများကိုမူရင်းပုလင်းထဲမှဆေးညွှန်းအချက်အလက်နှင့်အတူထုတ်ယူရမည်။ ၎င်းသည်ဆေးများကိုစီမံရာတွင်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မူလပုလင်းများကိုလုံခြုံစွာထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်ဆေးဝါးများကိုပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပါက၎င်းကိုသယ်ဆောင်မလာသည့်အခါသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမြင့်သောစင်ပေါ်တွင်ထားသင့်ကြောင်း Sweeney ကပြောကြားခဲ့သည်။ သင့်ကလေးသည်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်၌ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ချင်သည်ဆိုလျှင်သင်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းသင်ကြားရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်ထိုတွင်မကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။
ကိုသတိရပါ: တစ်ပုလင်း, ဖလားကို, ဒါမှမဟုတ်အိတ် Over-the- ကောင်တာရောင်းသောကြောင့်, ဒါကြောင့်အန္တရာယ်မကင်းဟုမဆိုလိုပါ။ သင်၏ကလေးများအားသူတို့၏သိလိုစိတ်မှကာကွယ်ရန်ဤပစ္စည်းများကိုအချိန်မရွေးလက်လှမ်းမမီနိုင်အောင်ကာကွယ်ထားပါ။
ဒါ့အပြင် အပိုသို့မဟုတ်အသုံးမပြုသည့်ဆေးဝါးများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာဖယ်ရှားပါ ။ တစ်နေ့နေ့တွင်သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဆိုပါကကလေးတစ် ဦး သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်မတော်တဆမျိုချမိသည့်အန္တရာယ်နှင့်မထိုက်တန်ပါ။
ထို့အပြင်မည်မျှပင်လုံခြုံစိတ်ချရသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားပါစေ၊ ထိန်းသိမ်းထားပါ အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေး သင်၏အိမ်တွင်ထင်ရှားသော hotline နံပါတ်။ နံပါတ် ၈၀၀-၂၂၂-၁၂၂၂ ဖြစ်ပြီးမတော်တဆအလွန်အကျွံသောက်ပါက၎င်းကိုသင့်အားအဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ သူတို့ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။
ဘာနဲ့စတင်ကြပါစို့ မဟုတ်ဘူး သင်၏ကလေးများအားဆေးဝါးအကြောင်းပြောပြရန်။ ဆေးသည်သကြားလုံးဖြစ်သည်၊ ကလေးများအားထိုဆေးသောက်ရန်အတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကလေးအားဘယ်တော့မျှမပြောပါနှင့်။
သူတို့ကဆေးဟာသကြားလုံးလို့ထင်ရင် (ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသကြားလုံးနဲ့တူတဲ့ဆေးတွေကိုသောက်နေတယ်ဆိုရင်) သူတို့ကပိုလိုချင်လာပြီးသူတို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုယူပြီးအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးများအားဆေးဝါးများအကြောင်းအမှန်တရားကိုပြောပြပါ။ Sweeney ကပြောကြားသည်မှာဆေးဝါးများကိုမှန်ကန်စွာသောက်သုံးလျှင်ကောင်းသည်ဟုရှင်းပြပါ။ သို့သော်အလွန်အကျွံယူလျှင်သို့မဟုတ်မလိုအပ်သည့်အခါယူလျှင်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးဆက်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ ဆေးပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအရောင်စာအုပ် သင်စကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကလေးများသည်မိဘများကိုအတုခိုးရန်ချစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်အားဆေးဝါးများသောက်နေသည်ကိုတွေ့လျှင်သူတို့သည်စမ်းကြည့်ချင်ပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံကလေးများအနေဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်နာခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောကြောင့်မိဘများအသုံးပြုသောဆေးပြားကိုအရသာရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ကလေးများကို၎င်းကိုကုသရန်ဆေးမပေးမီရောဂါတစ်ခု၏အမှန်တကယ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင်ဆေးသည်သူတို့အသက်အရွယ်အတွက်သင့်လျော်မှုရှိမရှိသေချာစေရန်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အိမ်နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
သင်၏အိမ်ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါလုံခြုံအောင်ထားရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ် ဦး မှညွှန်ကြားချက်မပေးလျှင်သူတို့ကိုမပေးပါနှင့်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိတိရစ္ဆာန်နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောတိရိစ္ဆာန်ဆရာ Sara Ochoa၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံပေး Sara Ochoa ကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်ကလေးများမဟုတ်ပါ doglab.com ။ သင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်စကားမပြောဘဲဆေးဝါးမပေးပါနှင့်။ ဒါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးသေစေနိုင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောဆေးညွန်းနှင့်ဆေးမသောက်ရသည့်ဆေးများသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လုံခြုံသည်။ အချို့ခွေးများကို Prozac သတ်မှတ်သည် ဥပမာအားဖြင့်တိုတောင်းသောကာလစိုးရိမ်စိတ်ဆေးများဖြစ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့မီးရှူးမီးပန်းများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွက်ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခု ။ သို့သော်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အွန်လိုင်းသုတေသန၏အဘယ်သူမျှမငွေပမာဏကိုသင်၏ VET ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှစ်များအတွက်အစားထိုးသည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ပြworseနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီသူတို့ကိုခေါ်။ မေးမြန်းပါ။
အခြားအရေးအပါဆုံးအရာ? အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောသောက်သုံးခြင်းမှဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစွာထားပါ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူမည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်ပျက်နိုင်သည်၊ မကြာခဏပြုလုပ်တတ်သည်။
Woodstock, Connecticut ရှိအောက်တိုဘာလမ်းကုသရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနမှကုသမှုခံယူထားသည့် DVM မှ DVB Kassandra Nielsen ကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမှ Legos၊ သူမမျှဝေထားသောမကြာသေးမီကကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး သည်ကျယ်လောင်သောအသံနှင့်ကွားသံကိုကြားရသောအခါသူမ၏သား၏ albuterol ရှူရှိုက်မိသည့်သူမ၏သြစတြေးလျနွားခွေးများကိုတီးတိုးပြောဆိုနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
Albuterol ပမာဏအနည်းငယ်ပင်အသက်အန္တရာယ်ရှိစေသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Nielsen ကပြောကြားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောသူများအနေဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တုန်ခါမှုကဲ့သို့သောပိုမိုပြင်းထန်သောနှလုံးရောဂါရှိသောနှလုံးခုန်နှုန်း၊ ခွေးသည်သူမ၏နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်မတည်မချင်းဆေးရုံတွင် ၂၄ နာရီနေခဲ့ရသည်။
သင်၏ဆေးဝါးများအားလုံးသည်သင်ရရှိထားသောအမြင့်ဆုံးစင်တာနှင့်သင့်စပ်စုနေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလက်လှမ်းမမီနိုင်အောင်သေချာပါစေ။ တနည်းကား, lockbox သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှမတော်တဆအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခါမျှစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သင်၏ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုမတော်တဆအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးပြီးလွယ်ကူသည်။ သငျသညျဆေးဝါးကိုစီမံခန့်ခွဲသောအခါ, R ကို5R ကိုလိုက်နာပါ, သင်ပြုသောအမှုသောအခါ, ထိုဆေးဝါးကိုပိတ်ထား။ ၎င်းသည်အချိန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ငွေများဖြင့်သင့်အားစိတ်ချမ်းသာမှုများစွာပေးလိမ့်မည်။
ဆီးချိုမဟုတ်သူများအတွက်ပုံမှန် a1c ကဘာလဲ
မင်း afrin ကိုဘယ်နှစ်ရက်သုံးလို့ရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမည်သို့သောက်နိုင်သနည်း